တရားပွဲနှင့်ပတ်သက်လို့သိလိုပါသည်။ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ရေးသားသူလှိုင်ကျော်ထွေး on ဇွန် 1, 2011 at 1:51pm in ဆွေးနွေးခြင်း
ဗုဒ္ဓ၏ တရားဓမ္မများသည် ကိလေသာနဲအောင်/သောကနဲအောင်/အသိသံဝေဂ ရဖွယ်ရာများဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါ၏။ အချို့တရားပွဲများ/တရားခွေများတွင်...ကြာနာဖူးရတဲ့ သူများပြောဆိုနေရာ၌ ဆရာတော်က အရမ်းရယ်ရတာပဲတဲ့ (သို့)တရားလေး ကောင်းလိုက်တာ ၀မ်းနည်းလို့ မျက်ရည်တောင်ဝဲရတယ်/ကျရတယ်တဲ့..။ဒီလိုစကားမျိုး ကြားနေရခြင်းအပေါ် ဆွေးနွေးလိုပါ၏..။ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးကြပါခင်ဗျာ..။မျက်ရည်သိမ်းရမှာလား....မျက်ရည်ကျရမှာလား။ ကိလေသာပွားရမှာလား....ကိလေသာနဲရမှာလား.....။ဟောကြားသူ၏ အားနည်းချက်လား.....နာယူုသူ၏ လွဲမှားချက်လား.....။အမှန်ကို သိရှိလိုခြင်း စိတ်ဆန္ဒဖြင့်သာ......
Permalink 2kg5nwr9jyn6b သည် ဇွန် 1, 2011 9:59pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
Permalink Nyi Nyi Naing သည် ဇွန် 1, 2011 11:47pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
ပေးသူနှင်.ယူသူ သဟဇာတ ဖြစ်ဖို.လိုတယ်လို.ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီး ပေးသူ ကော၊ယူသူပါ ကိုယ်.တာဝန် ကိုယ်သိဖို.လိုပါတယ်။အချိန်ဖြုံန်တာမျိုး မဖြစ်သင်.ပါဘူး၊ဟောကြားတဲ.နေရာမှာ အောက်ကပရိတ်သတ်ကို ထိန်းနိုင်ဖို.၊ဆွဲခေါ်နိုင်ဖို. စတဲ.နည်းဗျူဟာတွေရှိပါတယ်။သို.သော် တရားတော်ကို
အဂါဝရ မဖြစ်စေသင်.ပါ။ တရားပွဲဆိုလို. မေးပြစေ...တရားပွဲနှင်.အထူးတရားပွဲ ဘာကွာပါသလဲ။တစ်ချို.ပြောသံကြားတယ်...ဘယ်ဆရာတော်က
သိန်းဘယ်လောက်တင်မှ လိုက်တာ။သတ်မှတ်ဈေမရရင်ပင်.လို.မရဘူးတဲ.၊ဟုတ်လား ပြောကြပါဦး(သေချာရင်)။ဘုရားဟောခဲ.တာရှိတယ်နော်၊တချိန်
မှာတရားတော်တွေကို ငွေနဲ.လဲကြလိမ်.မယ်လို.။သင်္ကန်းစပတ်ထားရင်ပဲ သံဃာလို.ပြောကြရလိမ်.မယ်တဲ.၊ဘုရားရှင်ရဲ.ဥဏ်တော်ကြီးနဲ.ဟောခဲ.တာ။
အဲဒီခေတ်ကိုမြန်မြန်မရောက်ပါရစေနဲ.။သေချာတာက တရားတော်တွေဟာ ဟာသမဟုတ်ဘူး။သီချင်းမဟုတ်ဘူး။အားလုံးဟာ ကိလေသာနည်းပါးရေးနှင်.
နောက်ဆုံးပန်းတိုင် နိဗ္ဗာန်သာဖြစ်တယ်။(စာကြွင်း...လူရွှင်တော်တွေ တရားဟောဟန်နဲ.ပျက်လုံးထုတ်တာကလဲ တရားတော်ကို အဂါဝရပြုရာရောက်ပါတယ်။မလုတ်သင်.ပါဘူး)
Permalink လှိုင်ကျော်ထွေး သည် ဇွန် 2, 2011 12:47pmအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
တရားပွဲနှင့် အထူးတရားပွဲ ဘာမှမကွာဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်...။ အသုံးအနှုန်းစကားလုံးတွေ ဟိတ်ဟန်ဆောင်လာတာလို့ ယူဆမိတာပဲ.။ ယခုတွေ့နေရတဲ့ တရားပွဲဆိုင်းဘုတ်တွေ/ကြော်ငြာ လက်ကမ်းစာဆောင်တွေမှာတော့ အထူးတရားပွဲဆိုပြီး တွေ့ရတာများပါတယ်ဗျာ။သို့သော် တရားမှာတော့ ဒါနတရား၊သီလတရား၊၀ိပဿနာဘာဝနာ(သစ္စာလေးပါး)တရားဆိုပြီး အဆင့်တော့ ကွဲတာပေါ့နော်...။
Permalink 39rss2noq1mi9 သည် ဇွန် 2, 2011 12:35amအချိန်တွင်ဆွေးနွေးချက်ကိုပြုလုပ်သွားပါသည်။
မှန်ပါတယ်။ ကိလေသာနည်းရအောင်တရားနာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ (သို့) ဆရာတော်များ တရားဟောရာတွင်နားကြားသူ ပရိတ်သတ်၏နားကြားနိူင်သော တရားတော်များအားရွေးချယ်၍ဟောကြားတော်မူကြရပါတယ် ခင်ဗျား။ ဆရာတော်များ
သည် ဟောကြားသောအခါ၌ လိုချင်သောအကြောင်းကို ရည်ရွယ်ဟောာကြားသော်လည်း နားကြားသောပရိတ်သတ်၏
နာယူနိူင်သောအခြေအနေများကြောင့် တရားတော်များအပေါ်တွင် အနှစ်သာရ ကွဲပြားတတ်ကြပါ၏